Ny fambolena indostrialy zana-tongolo lay sy tongolo lay dia natomboka tao amin'ny faritanin'i Stavropol - magazine "Potato System"
Tena vaovao Vaovao momba ny faritra
Ny fambolena indostrialy tongolo lay sy tongolo lay dia natomboka tao amin'ny faritanin'i Stavropol
в vaovao, Vaovao momba ny faritra
Ny orinasa tongolo lay dia làlana mahomby amin'ny fambolena, fa ny famokarana indostrialy an'io legioma any Russia io dia tsy dia mandroso. Ny tongolo gasy dia maniry amin'izao fotoana izao amin'ny sehatry ny zana-kazo manokana, ny volavola misy dia tsy manarona na dia ny antsasaky ny filan'ny Rosiana aza. Ao amin'ny faritany Stavropol, ny fahaleovan-tena amin'ny tongolo lay dia 26%. Hanova ity toe-javatra ity sy handray anjara amin'ny programa fanoloana import dia notapahin'i Izobilie LLC avy amin'ny Distrikan'i Georgievsky ao amin'ny Faritanin'i Stavropol.
- Eo amin'ny tsena rosiana, tongolo lay mihoatra ny 70% no ampidirina, avy any Chine ny ankamaroany. Ao anatin'ny programa fanoloana import, dia nanapa-kevitra ny hanomboka hamboly tongolo lay ao an-trano izahay, namafy tongolo lay taraiky amin'ny ririnina ho fitehirizana tsena ary nifantina karazana safidin-trano telo. Ho an'ny fijinjana tamin'ny taona 2021 dia namboly 200 hektara izahay: mbola tsy nisy toa izany tany amin'ny faritany Stavropol, "hoy i Yuri Ishchenko, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Izobilie LLC.
Ny toeram-pambolena dia nanatona ny fambolena tongolo lay tsara: ny legioma mbola lavitra ny masaka, fa efa mijinja ny vokatra eto. Tsy ny loha maina maina ihany no tadiavina, fa koa ny zana-tsipiky ny tongolo lay. Orinasa Dagestan, iray amin'ireo mpamokatra tongolo tongolo pickled lehibe indrindra any Rosia, dia nanjary liana tamin'ny akora tsy mahazatra an'ny faritra.
- Efa nandefa zana-tsipìka 50 taonina mahery tany Dagestan izahay. Ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amintsika avy amin'ny repoblika dia fiaraha-miasa mahasoa ity. Any amin'ny faritra, ny tongolo lay dia tsy nambolena tamin'ny ambaratonga toy izany: matetika 30-50 hektara amin'ny velaran-tany manokana, noho izany ny mpividy dia mila manangona akora manta manerana ny faritra, izay tsy mahasoa ara-lojika. Ankoatr'izay, ny orinasa lehibe toa antsika dia manana fari-pahaizana avo lenta amin'ny fifehezana kalitao sy fambolena, "hoy ny fanazavan'i Yuriy Ishchenko.
Amin'ny andro ho avy, hanomboka hanangona tongolo lay tanora ny orinasa - efa misy ny mpividy amin'ny fijinjana manaraka any Dagestan sy any afovoan'i Russia. Kasaina hamidy 300 taonina amin'ireto vokatra ireto eto. Ny sisa amin'ny fijinjana dia ho masaka aoriana kely, fa ny fiompiana kosa dia efa vonona ny hijinja azy: ny mpijinja hafarana avy any ivelany miandry any anaty elatra. 200 hekitara tanteraka no kasaina hanangonana tongolo lay 2 arivo taonina.
- Tamin'ity taona ity, 11 hektara mahery no natokana ho an'ny legioma amin'ny tany malalaka any amin'ny faritra. Ireo mpamboly legioma ao amin'ny faritra dia efa nahazo fanampiana 118 tapitrisa roubles ho an'ny fanjakana. Ny vokatra lehibe ho antsika dia ny ovy, tongolo, laisoa, voatabia, saingy ny ampahany amin'ny tongolo lay dia somary ambany. Ny tsena ankehitriny dia heniky ny tongolo gasy sinoa, na dia ny tongolo lay ao anatiny aza dia mihoatra noho izany ny tsiro sy ny toetra hafa, - hoy i Vyacheslav Dryiger, lefitra voalohan'ny minisitry ny fambolena ao amin'ny faritanin'i Stavropol.
LLC Izobilie avy ao amin'ny Distrikan'i Georgievsky dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana masomboly. Misy tany misy rano 4 XNUMX hektara voatokana ho an'ny voa maniry eto - ity dia iray amin'ireo tany fambolena lehibe indrindra ambanin'ny fanamainana ao amin'ny faritra. Ny laharam-pahamehana ho an'ny mpamokatra dia ny voan'ny katsaka, ny tanamasoandro, ny soja ary ny ririnina.
Saingy naka toerana matanjaka teo amin'ny sehatry ny fitomboan'ny voa, ny orinasa dia nanapa-kevitra ny hahay ny indostrian'ny fambolena legioma. Tamin'ny taon-dasa, ovy, karaoty, tongolo ary tongolo lay no nambolena teto ho andrana.
Source: Minisiteran'ny Fambolena amin'ny faritany Stavropol
Tags: tongolo gasyFaritanin'i Stavropol
Ny fampandrosoana ny fambolena legioma sy ovy dia nomanina ao amin'ny faritanin'i Stavropol
Ny governoran'ny Faritany Stavropol dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao Moskoa, izay nanambarana ny fahatsinjovana ny fampandrosoana ny legioma sy ovy ao amin'ny faritra. Drafitr'asa fampandrosoana...
Nanomboka niasa tao Stavropol ny laboratoara agroconsulting an'ny JSC Firm "August"
Ny fikarohana ataon'ny manam-pahaizana manokana dia hanampy hamantatra ireo loza mety hitranga amin'ny voly ho avy amin'ny fotoana mety, ary koa hamoronana drafitra fiarovana sy fanjarian-tsakafo ...
Ny fijinjana ovy dia mahazo vahana any amin'ny faritany Stavropol
Tamin'ny 14 Aogositra, ny fijinjana ovy be amin'ny faritany rehetra ao amin'ny faritra dia nahatratra 33 taonina niaraka tamin'ny vokatra 407 c / ha, izay ...
Webinariona ovy: mianatra mafy - mora eny an-tsaha
Ny Duma an'ny fanjakana ao amin'ny Federasiona Rosiana dia handinika volavolan-dalàna hanovana ny fombafomba fisoratana anarana amin'ny famonoana bibikely